Waftigii Ka Socday Wasaarada Beeraha JDFI Oo Gaadhay Tuulad Gode. - Cakaara News
Waftigii Ka Socday Wasaarada Beeraha JDFI Oo Gaadhay Tuulad Gode.
Erer(cakaaranews) Axad, 14ka August, 2016, Waftigii ka socday wasaarada beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee JDFI ee ay hogaaminasay wasiiru dawlaha wasaarada Beeraha iyo khayraadka Dabiiciga ah ee JDFI marwo Saciida Khadiir oo uu horkacayay wasiir ku xigeenka horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI mudane Guuleed aw Cali Kaahin ayaa booqday tuulada Gode ee degmada Erer oo ka tirsan Gobolka Siti.
Waftigan oo shalay booqday tuulooyinka mid ah degmada qabribayax ayaa maanta siwayn loogu soo dhaweeyay tuulada gode ee degmada Erer. Waxayna ujeedada socdaalkoodu tahay in ay u kuur galaan hanaanka geedi socodka shaqo ee bixinta lacagaha barnaamijka Damaanad qaadka cuntada (PSNP) taasi oo uu deegaanka somalida itoobiya ku noqday hormuud ku dayasha mudan marka loo eego deegaanada kale ee dalka. ka dib markii ay bulshada DDSI ee la gaadhsiin jiray deeqdan ay door bideen in barmaamijkan oo hadda ka hor lagu siin jiray raashin loogu badalo lacag ay ku xoojiyaan wax soo saarka beeraha. Nidaamkan ayaa noqday mid ay deegaanada kale ee dalku kaga daydaan degaanka somalida itoobiya.
Wasiiru dawlaha wasaarada beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee JDfI marwo saciida khadiir oo la kulantay bulshada ku dhaqan tuulada gode wakhti la siinayay lacagta barmaamijkan PSNP ayaa aad u bogaadisay sida ay bulshadu uga faa’iidaysanayso. waxa kale oo aad u soo jiitay in bulshada ka faa’iidaysanasay barnaamjika ay adeeg sanayeen nidaamka kaydsiga kuwaasi oo dhiganayay lacagta ay ka helaan barmaamijkan bangiga ganacsiga itoobiya oo goobtaasi ugu geeyay adeega dhigaalka ah si ay barito wax ugu qabsataan.
Marwo saciida oo bulshada ka faa’iidaysanasa barmaajikan waraysi la yeelatay ayaa waxa ay waydiinasay midka u faa’iido badan raashinkii la siinayay iyo lacagta la siinayo hadda. waxayna bulshada u sheegeen wasiiru dawalaaha in ay ka faa’iido badan tahay in ay lacag lagu siiyo si ay iyagu wax ugula soo baxaan.